Ukupheka - ubuciko grand uyakwazi ngisho nemithetho eyisisekelo izithako ukudala wobuciko kweqiniso. Kunengqondo, inkukhu nelayisi - yezingxenye bakudala ukuthi Site kuphela ukwaneliseka yindlala. Boring, nakuba ezidliwayo. Nokho, irayisi, kubhakwe kuhlanganiswe nanoma inkukhu kuhhavini, bangaba umhlobiso wangempela itafula zemikhosi - uma uthola ukupheka ngobuhlakani. Nokho, i-ukudla abayitoho ezinhle kakhulu. Futhi akusho ukuthi nje eyakhayo. Inkukhu wabhaka nge irayisi kuhhavini, yilapho kungase kahle iresiphi intandokazi emndenini wakho. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi kungenzeka ukulungiselela ezihlukahlukene mass izindlela.
A iresiphi elula inkukhu kubhakwe kuhlanganiswe nanoma irayisi kuhhavini
Lolu khetho ilungele ngesikhathi lapho ungenayo isikhathi eside Ukupheka zokukhwabanisa. Udinga ezimbili izinkomishi umhluzi (ungakwazi ukuntanta cube, nakuba ukunambitheka uzolahlekelwa kuwo). Glass irayisi exutshwe amabili wezipuni of bhotela elicibilikile, onion Dome umhluzi sikhuntile. Ingxube isakazwa eduze phansi endishini ukubhaka. Phezulu ukubola inkukhu iqolo. It kungenziwa uthathe yizicucu ezinkulu izidumbu, amaphiko noma imilenze. Inyama engeza ezinye usawoti kanye priperchivaetsya kungaba pritrusit seasonings ozithandayo. Ifomu ibekwe kuhhavini kwesigamu sehora benqamula baking inkukhu Okuthwibizayo nelayisi ukuhlanganiswa. Inani isikhathi sokuhlala incike osayizi inkukhu, kusukela imizuzu 45 ihora.
Amnandi Futhi ezihlukahlukene
Elimnandi, mnandi futhi ewusizo inkukhu nge irayisi nemifino, wabhaka kuhhavini. Broiler sehlukaniswe izingcezu elincane. Encwadini Skillet kancane ipuleti pripuskayut garlic amakhanda; ke kukhona ngokushesha inkukhu ethosiwe. Konke lokhu elivulela ifomu. Top imibuthano abathathu ngosile utamatisi, isitshalo seqanda nokukodwa izaqathe naphakathi ezinkulu (kwayo ongahluziwe). Bathulula izinkomishi ezimbili noma ezintathu irayisi aqotshwe anyanisi nge parsley esibayeni. Bese uya pepper, usawoti, emhlabathini ginger, amanzi, ukuze zimboze imikhiqizo, bonke okuxubile - esithandweni. Ilayisi, inkukhu ephekwe eziko izobamba ihora ikota. Udinga ukudla sauce ashisayo sivunyiwe noma iyiphi. Ngisho ukhilimu omuncu esiphundu.
Lapho ukufika nalehleliwe izivakashi, lo engcono ukubhaka lonke inkukhu nge irayisi kuhhavini. Ukupheka kulula, uhlobo dish okumnandi, ukunambitheka - emihle kakhulu.
Isidumbu wageza, napkins womile, pepper ngosawoti. A ingilazi nelayisi eliphekwe kube yingxenye-ukulungela exutshwe isanqante kanye no-anyanisi ethosiwe (imifino usike mikhulu) nendebe isigamu sezithelo zevini ezonyisiweyo. I ukugcwaliswa Ufakwa inkukhu akuyona Friend kakhulu; esiswini ivikelwe nge asikiweko. Ukubhaka isuswe eziko washiya ukwakha othi awube. Ngezikhathi, inyoni kufanele uyophuziswa ivelele juice.
ikhanda Okuphakade umndeni ngamunye - the budedengu kuhhavini ngemva kokuwusebenzisa. Ukuze ugweme lezi umsebenzi ezingemnandi, sinikeza wena ubhake inkukhu nge irayisi kuhhavini ngokuphelele emkhonweni Culinary. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi le nyoni ibe wusizo, ngaphandle kokulahlekelwa ukunambitheka, noma e juiciness.
Isidumbu sibe nenye grate pepper eziningana, usawoti kanye nezinkezo ezine Worcestershire sauce. Ngemva kwalokho-ke retracts esikhwameni kanye esiqandisini ngosuku - ukuba marinate. A nengxenye inkomishi irayisi abilisiwe kancane. Kungaba exutshwa utamatisi okuthosiwe nokudla Diced. Stuffed nenye inyoni, kufihlwe emikhonweni; ngisho tastier uthola uma abeke tincetu yayo isitshalo seqanda kanye bell pepper rings. imizuzu 50 ezingeni lokushisa 200 Celsius - futhi inkukhu kubhakwe kuhlanganiswe nanoma irayisi kuhhavini, isilungele ukukhonza. Kungaba ukuthi abeke cherry utamatisi, iminqumo, radishes, ukhukhamba - ngifuna ocebile kuka isizini wamanje.
Lapho ulungiselela inkukhu nge irayisi kuhhavini, nje zokupheka elula ukunikeza imiphumela emihle kakhulu. Pilaf, kuphekwe ngokwesiko, a izitsha kuhle amafutha. Akubona bonke abantu abayofuna ukusamukela ngomusa isisu. Kodwa inguqulo inkukhu kufanelekile ngisho izingane.
Inyama athathe, kufanelekile lezibopho, wadubula emilenzeni. Kufanele marinate ngobusuku obubodwa, okuyinto okuxubile ngesipuni inkukhu fresh kalamula, esilinganayo usoso wesoya, usawoti, pepper kanye anyanisi oqotshiwe.
Ingxenye esigcwele inkomishi irayisi kwasakazwa izimbiza ezintathu. Phezulu ukubola inkukhu umhluzi iziqukathi zigcwele, futhi phezulu embozwe okuqukethwe zazharki isanqante-anyanisi. Izimbiza ezibekwe kuhovini abandayo. Amazinga kancane kancane alethwe degrees 200, bese ukukhomba ingxenye yehora.
It ebhodweni ukhonza ngqo.
Kuvele iresiphi engavamile
Spicy futhi elimnandi zokwazi irayisi, inkukhu nezitini kuhhavini, uma inyama zangaphambi kulolo ketshezi ngefomethi ekhethekile. UJesu uzakuhlala njengobana nezinkezo ezintathu usoso wesoya ezimbili - amafutha yemifino, spoon of uju kanye ginger, kuthathwe ngokubona kwayo. Marinate kudingeka okungenani amahora ambalwa. Kungcono Yiqiniso, sikwenze kusihlwa. Isinyathelo esilandelayo kuyoba ukulungiswa okusheshayo ukuthosa inkukhu. Kwabe sekuthi ngo-pan ithululelwé ingilazi irayisi futhi okusemathinini corn Bank (ngokusekelwe amakhilogramu ikota inyama), yonke imikhiqizo axutshwa, futhi isiqeshana ipuleti ibekwe kuhovini oshisayo kuze okusanhlamvu okuphekiwe. Uma uke steamed irayisi kuyoba okwanele emaminithi la-15.
Lokhu irayisi, inkukhu ephekwe eziko, efanelekayo ukudla kwasekuseni, eyodla: isidlo uphendulela ukukhanya okwanele, futhi ukulungele ngaphandle nobunzima kakhulu. Four amagremu umucu inqanyulwa, anyanisi oqotshiwe, izinkomishi ezimbili abilisiwe irayisi. Salt, izinongo - ngendlela othanda ngayo. Ifomu is ngamafutha, okungcono ukhilimu. It is basakaza ku workpiece ayigcwalisa amaqanda amabili, ngesiswebhu a Foam nge inkomishi kwesigamu ubisi fat noma ukhilimu. amaminithi amahlanu of baking pha kuwe esiphundu, Yinhle. Ukuze iphunga kanye Umbuso uthathe Casserole ukukhonza efafazwe fresh amakhambi oqoshiwe.
Uma lazy kakhulu ukupheka irayisi eceleni, usebenzise inguqulo ezehlukene casseroles. Amabili izinkomishi irayisi ehlakazekile ngezansi efomini futhi ligcwaliswe izinkomishi eyodwa nengxenye inkukhu umhluzi. Ayikho isobho - zisebenzisa amanzi usawoti. Ikhilogremu inkukhu wageza, uthathe cubes ezincane futhi uboniswa phezu ungqimba irayisi. Kutholwe phakathi izingcezu inyama isipinashi eqandisiwe, 100-150 amagremu. Ifomu sisuswa kuhhavini for isigamu sehora; Phakathi nalesi sikhathi, uketshezi ayahwamuka, irayisi kuyinto crumbly, futhi inkukhu - cishe eseqedile. Casserole ligcwele yashizi ushizi kanzima. Kungenjalo, wabeka ushizi sauce. Ungase futhi babeka izingqimba ukhilimu ushizi, uma umthanda. Enye imizuzu eyishumi ukulinda ushizi uze yakha uqweqwe kuhhavini, futhi usulungele eyodla.
Ubhiya ezinhle, hhayi kuphela ukusebenzisa ngaphakathi ezomisiwe noma isikhuphashe. It ikuvumela ukuba apheke irayisi emangalisayo, inkukhu ephekwe eziko. Ngakho-ke kuyinto engcono kakhulu yokuthola isidumbu beqinile, kodwa iresiphi kungenziwa kuphekwe "izingxenye" ehlukile. Bird amahora amathathu noma amane ofakwe ubhiya emnyama, lapho izinongo usawoti wanezela. Bright isiphuzo izinhlobo hhayi irayisi efanelekayo iqala ukunambitha ezibabayo lubonakale. Amabili izinkomishi irayisi steamed wageza. Loku kutawufaka sandla ukupheka yayo ngokushesha. Ngendlela wokubhaka, ukuthosa epanini noma Wok utyatnitsu wathela amafutha yemifino (cishe izikhathi eziphindwe kasithupha nezinkezo). It is batheleka irayisi futhi ugcwale ketshezi, elalihlala inkukhu, aphuze ingilazi kabhiya kanye ezimbili - amanzi abilayo. Ngemva izikebhe izinongo usawoti elixutshwe oluthile lokudla; wafaka inkukhu. Likhono isivalo wembatha imizuzu engamashumi amane kuhovini kahle evuthayo.
Lokhu dish banganikeza, futhi izingane zonke "degrees" ku shabalala eziko, futhi isidlo kuvela ngokuphelele esithambile.
Uma ukubhaka lonke inkukhu isidumbu, amaphiko kanye nemilenze kufanele noma ukugoqa in ucwecwe noma owagcoba. Ngaphandle kwalokho, bangase bashise, futhi inyama isikhumba eduze amathiphu eyomile.
ngoba lezi izindlela irayisi round izinhlobo zazingezinhle: kuba okunamathelayo kakhulu. groats Steamed ukuthenga akudingekile; okubaluleke kakhulu, ukuthi isibalo kwadingeka okusanhlamvu eside.
Iqhinga kancane ayaziwa kuwo wonke umuntu: ukuba inkukhu waphenduka kamnandi futhi kuhhavini akuyona ezingcolile, kudingeka ezimboza ugqoko baking nge gauze ofakwe uwoyela zemifino. Yiqiniso, uma usebenzisa isitofu igesi liyadingeka ukuze siqiniseke ukuthi kuze kube semikhawulweni lendwangu akazange ukufinyelela umlilo. Fire lokulwa - yini lokho nathi sizama, ukwenza ukupheka.
I mnandi kakhulu uqweqwe yegolide omangalisayo atholakala uma isidumbu elingenamikhono ngoju. Nokho, le nyoni ungathola kancane elinambitheka sashukela.